July 20, 2021 - Celegroup
July 20, 2021 cele group 0
ပရဟိတသများမှာ ပြည်သူများသို့မေတ္တာရပ်ခံချက် ပြည်သူများသို့မေတ္တာရပ်ခံချက် ယခု ချိန်ခါမှာ လူနာတင်ယာဉ်တွေ မီးတန်းဖွင့်၊ ဇုံမီးဖွင့်၊ အသံဖွင့်မောင်းလာရင် ခေတ္တခဏ လမ်းဖယ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။…. ခုက ကျွန်တော်တို့ PPE ဝတ်ထားရသလို.. မျက်မှန်တွေတပ် ၊ face shield တွေတပ်ထားရပါတယ်….မျက်မှန်ပေါက်သေးသေးလေးကနေ ချွေးတွေထွက်နေတဲ့ကြားကအရှေ့ကိုကြည့်ပြီးကားမောင်းရတာပါ။ တခါတလေ ယာဉ်မောင်းသူမမြင်ရတော့လို့ ဘေးကအကူကိုလမ်းပြခိုင်းပြီးမောင်းနှင်ရတာပါ….. တကယ်လို့.. မတော်တဆဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ကားထဲမှာ ကိုဗစ် လူနာတွေသယ်ဆောင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်.. အရမ်းကိုအန္တရာယ်များတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်… ကျွန်တော်တို့ကို ပူးပေါင်းကူညီပေးကြပါလို့…မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်.ခင်ဗျာ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးကြပါ […]
ငါတို့ သေချာပေါက် အကြောတင်းစွာကျန်ခဲ့ရမည်
မနက်မိုးလင်း ကိုယ်လက်သန့်စင် ဘုရားဝတ်ပြု ကန်တော့ ပြီး တစ်နေ့တာကို စတင်ဖြတ်သန်းပါတယ် လက်ဆေးတယ်။Mask တပ်တယ်။ရေနွေးပူပူ အလုပ်လုပ်ရင်း 15 မိနစ် တစ်ခါ သောက်တယ်။ ဒင်းဒီလည်ချောင်းထဲ နေနိုင်အုံးမလား ငါးပိရည်ကြိုနဲ့ထမင်းကိုနယ် ကြက်ဥပြုတ်နဲ့ ကြက်သွန်နီ တို့စားတယ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းလေးကိုက် ရေနွေးလေးနဲ့ အကုန်အကျသက်သာ ရောဂါလည်းကာကွယ်ပြီးသား ဒင်းအစာအိမ်ထဲမှာ မာလကီးယားနေလောက်ပြီ ရေခဲရေ လုံးဝ မသောက် အအေး လုံးဝမသောက်နဲ့ မိုးချုပ် ရေမချိုးနဲ့ ခေါင်းမလျှော်နဲ့ ဖျားနိုင်မယ့် […]
အနက်ရောင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားများ လူတစ်ယောက်ကို အကြိုက်တစ်ခုစီပါပဲ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမြင်မတူသလိုအကြိုက်လည်းမတူကြပါဘူး။ အနက်ရောင် ဝတ်ဆင်သူတွေက ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိကြတယ် ပိုအောင်မြင်ကြတယ်လို့ လေ့လာချက်တွေက ဆိုထားပါတယ် သင့်ရဲ့ Favorite Colorကအနက်ရောင်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကသင့်အတွက်ပါ။ အနက်ရောင်ကြိုက်တဲ့သင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကတော့- ၁။ သင်ကအမှီအခိုကင်းပါတယ်။ဘယ်သူကိုမှအားမကိုးတတ်ပါဘူး။ ဖြစ်သမျှအခြေအနေတိုင်းကိုတစ်ယောက်တည်းထိန်းချုပ်တတ်ပါတယ်။ ၂။ အရာရာကို အလေးအနက်ထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးရိုးဆန်ပြီးသိုသိုသိပ်သိပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ၃။ ခံစားချက်မရှိတဲ့ မျက်နှာထားမျိုးနဲ့ နေတတ်ပါတယ်။တစ်ခါတလေလောကကြီးကိုအရွဲ့တိုက်နေတတ်ပါတယ်။ ၄။ အာရုံနောက်စရာတွေကို ခေါင်းထဲ သိပ်မထည့်တတ်ကြပါဘူး။ အဆိုးမြင်စိတ်တွေဝင်လာတာကိုမုန်းတီးပါတယ်။ ၅။ သင့်အကြောင်းကိုအခြားသူတွေဆီမှာသိပ်မပြောပြတတ်ပါဘူး။ […]
“လောကမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နိုင်ဖို့သာ အဓိက”
စျေးဝယ်သူနဲ့ အငြင်းပွားလျှင် ဖောက်သည်များလည်း ရှားလာမယ်..အလုပ်ဖော်နှင့် အငြင်းပွားလျှင် ညီညွှတ်မူ့လည်း ပျောက်ကုန်မယ်။ အလုပ်ပိုင်ရှင်နှင့် အငြင်းပွားလျှင် အောင်မြင်မူ့လည်း နှောက်နှေးမယ်…ဆွေမျိုးမောင်နှမများနှင့် အငြင်းပွားလျှင် အားကိုးအားထား မဲ့လိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းများနှင့် အငြင်းပွားလျှင် မိတ်ဆွေစစ်လည်း လျော့နည်းမယ်…ချစ်သူနှင့် အငြင်းပွားလည်း ချစ်တဲ့စိတ်များ ပျက်ပြယ်မယ်။ ဘယ်သူနဲ့ဘဲ အငြင်းပွားပွား အငြင်းပွားလို့ရတဲ့ အနိုင်တိုင်းဟာ ကိုယ့်အတွက် အရှုံးတရားသာဖြစ်တယ်…. မနေ့က ငါဖြစ်တဲ့ ငါ့ကို ဒီနေ့ငါဖြစ်တဲ့ ငါကသာ အနိုင်ယူပါ ဒီတော့မှ စစ်မှန်တဲ့ […]
တဲအိမ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တိုက်အိမ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မပြုအပ်၊ မပြုထိုက်သော အရာ (၂၃) မျိုး
တဲအိမ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တိုက်အိမ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မပြုအပ်၊ မပြုထိုက်သော အရာ (၂၃) မျိုး လူတိုင်း လူတိုင်း အိမ်မှာ ဒါမျိုးတွေ လုံးဝ မလုပ်မိကြ ပါစေနဲ့။ (တန်ဖိုးရှိတဲ့ သိမှတ်စရာတွေပါ) အိမ်၌မပြု သင့် မထားသင့်သော ရှောင်ရန်များ သင်သိပြီးရင် မျှဝေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်… ၁။ အိမ်ရှေ့၌ငှက်ပျောပင်မစိုက်အပ်။ ၂။ရေစိုအဝတ်များကို ညအချိန် သစ်ပင်ပေါ် အဝတ်တန်းပေါ် မထားရ ၃။ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ အပြောဆို မကြမ်းရ […]
ဒီအကျင့်တွေကိုမပြင်နိုင်ရင် အပျိုကြီးလူပျိုကြီးဖြစ်ဖို့ သေချာနေပြီ
ဒီအကျင့်တွေကိုမပြင်နိုင်ရင် အပျိုကြီးလူပျိုကြီးဖြစ်ဖို့ သေချာနေပြီ Single လေးတို့ရေ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူ ကိုယ်ကချစ်နေရတဲ့သူနဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ဖန်တီးရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့ အနောက်မှာ ထောက်ကန်ပေးထားမယ့်သူ ကိုယ့်ရဲ့ ဘေးမှာ ဖေးမပေးထားမယ့်သူ မရှိတဲ့ တစ်ယောက်တည်း ဘဝဟာ အမှီအခိုကင်းမဲ့တဲ့ ဘဝမို့ စိတ်ကျေနပ်စရာပါလို့ ထင်ရနိုင်ပေမယ့်လည်း အဖော်မဲ့တဲ့ ဘဝတစ်ခုမို့ ဘဝရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာတွေကို အပြည့်အဝ မခံစားရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ချို့အမူအကျင့်တွေကြောင့် ဘဝမှာ လက်တွဲဖော်ရှာမရဘဲ […]